အထိရောက်ဆုံးသော အင်တာနက်ပရိတ်သတ်ဆီသို့ သင့်ကြော်ငြာကို အရောက်ပို့ဆောင်ပေးမယ့် MyOpenAds – MyOpenAds
MyOpenAds ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ?
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနှင့် အကြီးဆုံး Online Ad Network တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Website ပေါင်းများစွာတွင် ကြော်ငြာများကို တစ်နေရာတည်းကနေ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သော One Stop Ads Network တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အကြီးဆုံး Online Ad Network ဆိုတော့ ဘယ်သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလို့လဲ?
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူသိများပြီး အကျော်ကြားဆုံး Website ပေါင်း ၃၀ ကျော်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
လူသိများပြီး ကျော်ကြားတဲ့ Website တွေက ဘယ်သူတွေလဲ?
လူသိများ ကျော်ကြားတဲ့ Website တွေကတော့ Eleven, 7Day, Myanmar Times, Mizzima, ThitHtooLwin, DVB, The Voice Weekly, Kumudra, The Yangon Times, Internet Journal, Pyaw Sa Yar, Buzzy, JFFUN.net, Digital Times, Trend Myanmar, Momolay, Democracy Today အစရှိသော Website များဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ Website တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပြီး ကြော်ငြာရှင်တွေအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲ?
တစ်လလျှင် Active Visitors ပေါင်း ၁၂.၅ သန်းဆီသို့ ကြော်ငြာအကြိမ်အရေအတွက်ပေါင်း သန်း ၃၅၀ ကျော်အထိ ပြသပေးနိုင်ပါတယ်။
ကြော်ငြာရှင်တွေအတွက် ဘယ်လိုအကျိုအမြတ်တွေရနိုင်လို့ MyOpenAds နဲ့ လက်တွဲကြော်ငြာသင့်တာလဲ?
၁။ Geo Targeting, Interest Group Targeting များဖြင့် ကြော်ငြာနိုင်ခြင်း၊ မိမိကြော်ငြာချင်သော နေ့ရက် နှင့် အချိန်တို့ကိုတိတိကျကျ သတ်မှတ်ကြော်ငြာနိုင်သောကြောင့် မိမိထုတ်ကုန် (သို့) ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ပိုမိုထိရောက်သော အင်တာနက် ကြော်ငြာ Campaign များဖန်တီးနိုင်ခြင်း
၂။ အချို့သော Ad Channel များတွင် ကြော်ငြာသကဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် သတ်မှတ်ထားသော Size များအတိုင်းသာ ကြော်ငြာနိုင်သည်မဟုတ်ဘဲ Desktop, Tablet, Mobile များအတွက် ကြော်ငြာရရှိနိုင်သော အရွယ်အစား (၂၀) အနက် Website တွင် လွတ်နေသော မည်သည့်နေရာတွင်မဆို သင့်လျော်သော ကြော်ငြာအရွယ်အစားကို အလျဉ်းသင့်သလို ပြသပေးနိုင်ခြင်း
၃။ မိမိစိတ်ကြိုက်ကြော်ငြာစရိတ်ကို သတ်မှတ်ပြီး ထိရောက်မည့်နည်းလမ်းများဖြစ်သည့် CPM, CPC အစရှိသည့် ကြော်ငြာပုံစံများဖြင့် ကြော်ငြာနိုင်ခြင်း
“ဒီအချက်အကုန်လား” လို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ မကုန်သေးပါဘူး။
လူကြီးမင်း၏ ထုတ်ကုန် (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား၊ ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်၊ ကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်များကို အခြေခံပြီး လက်ရှိ အွန်လိုင်းဈေးကွက်တွင် အထိရောက်ဆုံး ကြော်ငြာ Campaign များ ဖန်တီးနိုင်မယ့် Customized အစီအစဉ်များစွာ ရှိပါတယ်။ MyOpenAds ၏ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများမှ ကြော်ငြာရှင်များအတွက် အကောင်းဆုံး အကျိုးအမြတ်များရရှိအောင် စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
MyOpenAds ကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ?
ဖုန်းနံပတ် (+95)978300 4008 သို့ နေ့စဉ် မနက် ၈ နာရီမှ ည ၉ နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်နိုင်သလို
လူကြီးမင်း၏ အမည်၊ ကုမ္ပဏီအမည်(ဖော်ပြ၍ရပါက)၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား၊ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ အစရှိသော အချက်အလက်များကို [email protected] သို့လည်းကောင်း https://www.facebook.com/MyOpenAds/ ၏ Chat Box သို့လည်းကောင်း ပေးပို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့အတွက် အထိရောက်ဆုံး ကြော်ငြာများ ဖန်တီးပေးဖို့ MyOpenAds က အသင့်ရှိနေပါတယ်။
W-1, Yankin Garden Housing, Sayar San Road, Yankin Township, Yangon.
(+95)978300 4008